Mari Yekubatsira Kubva kuYunivhesiti yeHodges, Yakagadzirirwa Kuita Koreji Inotengeka
Hodges Yunivhesiti Yemari Rubatsiro, Scholarship, Kubatana, uye Zvirongwa zveDiscount
KuYunivhesiti yeHodges, tinoziva kuti dzimwe nguva kutyaira uko mudzidzi anofanira kubudirira hakuenderani nenzira dzavanofanirwa kuteedzera nadzo dzidzo. Ndosaka isu takazvipira kubatsira vadzidzi mukutsvaga rubatsiro rwemari uye mikana yekufunda yekuvabatsira munzira dzavo dzekubudirira. Kunze kwemamiriyoni gumi nerimwe emadhora muEASE kupa mibairo yatakagovera, isu tine huwandu hwedzidzo yemasangano, mapurogiramu ekuderedza mwero, uye zvirongwa zvekubhadhara zvakare.
Mhando dzeRubatsiro Ruripo:
Chengetedza iwe pachako. Iyo ndiyo Yakanyanya Investment Iwe yauchazombogadzira!
Kuwana dhigirii rekoreji ndechimwe chezvakakosha mari hombe iwe uchaita, uye isu tinotenda zvakasimba kuti uchafadzwa neako Hodges University kudyara.
Hodges Yunivhesiti Hofisi yeVadzidzi Vezvemari Zvemari yakazvipira nyanzvi kuti ikubatsire nedzidzo dzemari sarudzo senge rubatsiro rwemari, maakaundi evadzidzi, uye bhuku mhinduro mhinduro Wako Financial Aid Nyanzvi anogona kupa rutsigiro nemari yemari yako kana zviwanikwa uye zvemhuri zvisina kukwana.
Chengetedza ramangwana rako redzidzo uye zadza iyo FAFSA kunyorera nhasi. Hodges Yunivhesiti FAFSA kodhi iri 030375.
Hodges University FAFSA kodhi iri 030375.
Hodges FAFSA Nongedzo
Matanho ekunyorera kweMari Rubatsiro
1. Pedzisa iyo FAFSA
Kupedzisa iyo Free Application ye Federal Federal Aid Aid (FAFSA) ndiyo nhanho yekutanga yekuwana rubatsiro rwemubatanidzwa kukoreji. Kupedzisa uye kuendesa iyo FAFSA ndeye mahara uye inokurumidza, uye inokupa mukana kune iyo hombe sosi yemari rubatsiro kubhadhara kukoreji. Izvo zvinogona zvakare kuona kukodzera kwako kune nyika uye chikoro rubatsiro. Hodges 'FAFSA kodhi iri 030375.
2. Shanda nemupi wezano
KuYunivhesiti yeHodges, vanachipangamazano vezvemari vanogona kukubatsira kuti unzwisise sarudzo dzako dzekubhadhara kukoreji uye kukutungamira nenzira yekunyorera mhando dzakasiyana dzerubatsiro rwemari rwuripo.
3. Ongorora rubatsiro, kudzidza, zvikwereti, uye sarudzo dzekufunda-basa
Grants uye kudzidza kunopihwa zvichibva pane zvese zvinodiwa uye kukodzera uye ingangoita yemahara mari yevadzidzi vanosangana nezvinodiwa kukodzera. Kusiyana nezvipo, zvikwereti imari dzakakweretwa nevadzidzi uye / kana vabereki vavo uye dzinofanira kubhadharwa-nezvibereko. Mapurogiramu ekudzidza-ebasa anotendera vadzidzi kutora-chikamu-nguva mabasa ivo vachinyoresa kuHodges University.
4. Tsvaga tsamba yako yekupa mubairo
Yako Mubairo Tsamba inokuudza iwe mapurogiramu ebatsiro ezvemari iwe aunogona kugashira yako dzidzo kuHodges University. Tsamba yacho inosanganisira mhando uye huwandu hwerubatsiro rwemari iwe rwaunogona kuwana kubva kuFederal, State, uye chikoro masosi.
Kuwedzera Mari Dzinowanikwa
Mhando dzakasiyana dzeRubatsiro
Zvipo uye koreji kudzidza zvinopihwa zvichibva pakushaiwa uye kukodzera.
Scholarship ndeye mari yemahara yevadzidzi vanosangana nezvinodiwa.
Zvikwereti zvevadzidzi imari dzakakweretwa nevadzidzi uye / kana vabereki vavo dzinodzoreredzwa nefariro.
Kuwedzera Mari Yekushandisa
Niche Scholarship Tsvaga
Tsvaga Degree Yakanangana Scholarship
Veteran / Mauto Akasarudzika Tuition Rubatsiro
Hurumende Inopa Mari Zviwanikwa
KUSUNUNGURA / FRAG
Hodges University parizvino iri kutora chikamu muchirongwa cheEASE (yaimbozivikanwa seFRAG) chirongwa. Mumakore mashanu apfuura, Hodges University yakakwanisa kupa EASE kune vanopfuura 5 vadzidzi vane ingangoita $ 7,500M mukupa mari.
Hodges University parizvino iri kutora chikamu muBright Futures Chirongwa.
Hodges University inoshanda neFlorida Pre-Kubhadharwa uye inobvumira vadzidzi kuti vashandise yavo FPP mari pahungwaru hwavo.
Yakazara Florida yakagadzirwa kuti ibatsire nyika inopfuura mamirioni 2.8 evakuru vakawana imwe koreji kiredhiti, asi vasina kuwana dhigirii. Chikamu chakanakisa, sezvo Yakazara Florida inobhadharwa nenyika yeFlorida, iwo masevhisi avanopa mahara.
Anoshanda Duty Mauto Chirongwa - $ 250 yechikoro dhisikaundi paawa yechikwereti
Iyo Inoshanda Duty Yemauto Discount inowanikwa kune Inoshanda Duty Musoro 10 Service Nhengo uye Anoshanda Guard uye Reserve (AGR) sekutsanangurwa pazasi. Iyi dhisikaundi inowanikwa kune chero anokodzera degree-kutsvaga undergraduate kana akapedza kudzidza mudzidzi.
Veteran Chirongwa - $ 100 yechikoro dhisikaundi paawa yechikwereti / $ 2 yabviswa (iyo $ 10 mwero) dhisikaundi paawa yeawa
Iyo Veteran Discount inowanikwa kune vanoremekedzwa vakaburitswa veterans vasina kukodzera kune chero Dhipatimendi reVeterans Affairs kana Dhipatimendi reDziviriro dzidzo mabhenefiti. Iyi dhisikaundi inowanikwa kune chero anokodzera degree-kutsvaga undergraduate kana vakapedza kudzidza vadzidzi.
CareerSource Chirongwa - $ 100 yechikoro dhisikaundi paawa yechikwereti
Iyo CareerSource Discount inowanikwa kune vadzidzi vakanyoreswa muchirongwa chazvino uye vari kuwana rubatsiro rwemari kubva kuCareerSource yemari yavo yedzidzo.
Employer / Corporate Alliance Chirongwa - $ 100 yechikoro dhisikaundi paawa yechikwereti
Iyo Employer / Corporate Alliance Discount inowanikwa kune vadzidzi vakanyoreswa muchirongwa chezvino uye vanoshandirwa neimwe yeHodges University's Employer / Corporate mubatanidzwa. Chinyorwa chemibatanidzwa yazvino inogona kuwanikwa pazasi.
Hodges University Graduate (HUGS) Chirongwa - $ 100 yechikoro dhisikaundi paawa yechikwereti
HU Graduate Discount inowanikwa kune vadzidzi vakanyoreswa muchirongwa chiripo uye vapedza Bachelor's Degree kuHodges University uye vava kupedzisa yavo yekutanga Master's Degree neHodges University.
Ndapota shandisai Bhuku Rekudzidza kuongorora zvese nezve yega yega yechikoro dhisikaini chirongwa uye kukodzera zvinodiwa.
Corporate Alliance Discount
Brown & Brown Inishuwarenzi
Charlotte County Sheriff Hofisi
Guta reFt. Myers Dhipatimendi reMapurisa
Guta reMarco Island
Collier County Hurumende
Collier County Veruzhinji Zvikoro
Collier County Sheriff Hofisi
Glenview kuPelican Bay
Goridhe Gedhi Moto Kununura
Hendry County Chikoro Chikoro
Tariro Healthcare Services
Lee County Bhodhi reKomisheni maKomishina
Lee County Veruzhinji Zvikoro
Lee County Sheriff Hofisi
Lee Chirangaridzo Hutano Sisitimu
Millennium Chiremba Boka
Iyo Moorings, Inc.
Naples Chiremba Boka
NCH ​​Hutano Hutano System
Vanachiremba Kuchengetwa Kwekutanga kweSWFL
Vanachiremba Regional Healthcare System
Unofarira Mubatanidzwa Wemubatanidzwa? Bata yedu yeCommunity Outreach & Recruitment Liaison, Angie Manley, CFRE pa 239-938-7728 kana email amanley2@hodges.edu.
Dzidza Zvakawanda Pamusoro Pedu Mapurogiramu eScholarship
Hodges University Institutional Scholarship Ruzivo Pfupiso
Scholarship ichapihwa zvichibva pamatanho akasetwa eSpecial Award Mubairo pasi peyunivhesiti uye / kana zvinopihwa zvemupi.
Mushure mekunge iyo Scholarship Committee yagamuchira, mavhoti uye inobvumidza ese masomo pachikamu, iro rinogashira richaendeswa kuHofisi yeVadzidzi veMari Zvemari nekuda kwekubhadharisa.
Kupa mabhezari kuchayerwa zvakaenzana zvichibva pakudzidza kuita / giredhi poindi yepakati (GPA), chinzvimbo chekunyoresa (maawa echikwereti pachikamu chimwe nechimwe), kudiwa kwemari / inofungidzirwa mupiro wemhuri (EFC), uye chinyorwa chekushandisa / kubvunzurudza (kana zvichidikanwa).
Mvumo yekukodzera Kune ese maScholarship
Anopedza kudzidza- kana akapedza-chikamu chevadzidzi mune kumira kwakamira muchikamu chavo chazvino neinenge iri shoma yekuwedzera GPA ye2.0 ye undergraduate uye 3.0 GPA yevadzidzi vakapedza kudzidza kubvisa zvese zviripo zvipo nemari.
Dzidzo dzese dziri pazasi dzinogona kuda mamwe maitiro kuitira kuti mudzidzi akwanise kuwana iyo masomo.
Vadzidzi vanogashira mari yechikoro uye / kana kudzidza waivers sechikamu chezvimwe zvibvumirano zveyunivhesiti kana marongero anenge asingakwanise kuwana masosi echikoro sezvo urwu rudzi rwemari rwunoverengerwa semubatsiro wesangano.
Zvese zvinoshandiswa uye tsamba dzekutsanangura dzinova chivakwa cheHodges University uye hazvidzorerwe.
Chero fomu reruzivo rehunyanzvi rakawanikwa riine ruzivo rwekunyepa kana kutsausa ruchabviswa kubva mukuferefetwa neScholarship Committee.
Mitsara, kana zvichidikanwa, ichatongwa pachikero cherubric icho chinosanganisira maitiro / zvemukati pamwe nehunyanzvi hwekunyora hwakajeka, hunotaura, hwakarongeka zvine hungwaru, uye hunoratidza kunzwisiswa kwakasarudzika kwefilosofi uye kwepfungwa nyaya dzakanangana nemusoro wakapihwa. ).
Florida Yakazvimirira Koreji Fund
Sechinhengo cheIndende Makoreji uye maYunivhesiti eFlorida (ICUF), Hodges University ine mukana wekunyorera mabhezari anopiwa neFlorida Independent College Fund (FICF). Iyo FICF ndiyo isiri-purofiti hwaro hwechirongwa uye kusimudzira zviwanikwa zveVanozvimirira Makoreji neMayunivhesiti eFlorida (ICUF). Inochengetedza mari kubva kune vakazvimiririra vanopa, maindasitiri, uye mabhizinesi, pamwe nekubva mudunhu reFlorida. FICF kudzidza ane chaiwo mafomu uye maitiro ekufunga. Iyo Hodges University Scholarship Committee inoongorora kunyorera kwevadzidzi kweHU yakazvimiririra rubatsiro rwemari pamwe neboka revadzidzi rose kuti vawane mazita akakodzera eiyo mibairo yeFICF.
Kana mudzidzi akapihwa kudzidza kweFICF uye huwandu hwacho hukapfuuridzira huwandu hwenzvimbo yakazvimiririra yemadhora yakatarwa inoratidzwa mugwara nhamba yechipiri, ipapo mudzidzi anogona kunge asiri kunzi anokodzera kuwana rumwe rubatsiro kubva kuHodges University Scholarship Committee.
Kuonekwa, kuratidzwa, uye kukwana kweiyo fomu rekunyorera kuchazotarisirwa mukupa kupihwa kudzidza. Zvishandiso zvisina kukwana hazvizotariswe. Zvese zvinoshandiswa uye tsamba dzekutsanangura dzinova chivakwa cheHodges University uye hazvidzorerwe.
Mitsara, kana zvichidikanwa, ichatongwa pamusoro pechimiro uye zvemukati pamwe nekunyora zviri pachena, zvinotaurwa, zvakarongeka zvine hungwaru, uye zvichiratidza kunzwisiswa kwakatanhamara kwefilosofi uye kwepfungwa nyaya dzakabatanidzwa mumisoro yakapihwa.
Iyo Hodges University Scholarship Committee inogona kubvunzurudza vanyoreri sechikamu chezviitiko muchiitiko chekuwedzera ruzivo runodiwa pakuita sarudzo.
Mukupa iwo masifundi, iyo Hodges University Scholarship Committee inotonga vanyoreri maringe ne (1) kuita kwedzidzo, (2) chinyorwa chekunyorera, kana zvichidikanwa, (3) kubvunzurudzwa kwemunhu, kana zvichidikanwa, (4) kudiwa kwemari, uye (5) kushanda kuzere.
Scholarship yakapihwa neFLORIDA INDEPENDENT COLLEGE FUND (FICF) inoonekwa seyakafanana nedzimwe dzidzo dzakazvimiririra dzeHodges University. Vadzidzi vanosarudzwa kumubairo weFICF neHodges University Scholarship Committee. Mubairo huwandu hwakagadzwa neFICF hunogona kusiyana.
Hawks Fund Scholarship
Iyo Hawks Fund Scholarship (inozivikanwawo seyakajairwa kudzidza fund) inosanganisira mipiro yakajairwa kubva kune vanopa vanopa vanopa kuyunivhesiti nguva dzose. Iyi mari inosanganisira anotevera anzi masomo:
Gaynor Hawks Fund Scholarship
CenturyLink Hawks Fund Scholarship
Pettit Hawks Fund Scholarship
Zvichienderana nezvose zvataurwa, sezvataurwa pamusoro, nezve "Mvumo yekukodzera yeZVESE Scholarship. "
Vanopedza kudzidza degree-kutsvaga vadzidzi vanogumira kune anotevera huwandu pachikamu:
Vakanyoresa mu1-8 maawa echikwereti: anosvika kumadhora mazana mashanu
Vakanyoresa mu9-11 maawa echikwereti: anosvika kumadhora mazana mashanu
Vakanyoresa mune gumi nemaviri kana anopfuura maawa echikwereti: anosvika kumadhora 12
Vakapedza kudzidza-kutsvaga vadzidzi vanogumira kune anotevera huwandu pachikamu:
Vakanyoresa mu1-5 maawa echikwereti: anosvika kumadhora mazana mashanu
Vakanyoresa mu6-8 maawa echikwereti: anosvika kumadhora mazana mashanu
Vakanyoresa mune gumi nemaviri kana anopfuura maawa echikwereti: anosvika kumadhora 9
Tine huwandu hukuru hwevadzidzi vanonyorera kuHawks Fund Scholarship mwedzi wega, nekuda kwekutanga-kwemwedzi; zvisinei, iyo Scholarship Committee inoziva nezve iyo yazvino chiyero chemari uye inogona kudzikisira iyo mari iyo inogona kupihwa mwedzi wega wega.
Scholarship Rubatsiro rweVeterans Dzidzo (SAVE) Fund
Zvichienderana nezvose zvataurwa sezvataurwa pamusoro apa maererano "Mvumo yekukodzera yeZVESE Scholarships"; uye
Anofanirwa kuve muhondo kana murume / mukadzi / anovimba neakaremara kana mushakabvu murwi achiteedzera undergraduate kana graduate degree.
Mumakore apfuura, mari iyi yaiitwa kusvika panguva yezhizha kuitira kuti isarudze mari yemubhadharo wakatemerwa mubatanidzwa weVA Yellow Ribbon mabhenefiti; zvisinei, veterans vanoda VA Yero Ribhoni mari mugore rapfuura yakaderedza zvinoreva kuti isu tinogona kutanga kuburitsa yakawanda SAVE mari kuenda kumberi.
Jerry F. Nichols Kuverenga Scholarship
Zvichienderana nezvose zvataurwa sezvataurwa pamusoro apa maererano "Mvumo yekukodzera yeZVESE Scholarships";
Iyo yedzidzo degree chirongwa chinofanirwa kunge chiri muAccounting;
Yakazara-nguva yekunyoresa chimiro (12 kana zvimwe zvikwereti zveGG; 9 kana zvimwe zvikwereti zveGR); uye
Angangoita 3.0 GPA yevadzidzi vepasi- kana vanopedza kudzidza-chikamu.
Vadzidzi vanogona kupihwa kusvika kumadhora mazana mashanu nechidimbu.
Kuwanikwa kwemari kwakanyanya kushomeka asi paine zvirevo zvakasarudzika izvo nhamba huru yeakaunzi-vakuru vadzidzi vasiri kuita parizvino.
Jerry F. Nichols Veterans Kuongorora Scholarship
Veteran / chinzvimbo chemauto chinodiwa, asi chinogona kupihwa mudzidzi asina chinzvimbo chemauto / veteran kana pasina mudzidzi anoonekwa seanokodzera;
Kuwanikwa kwemari kwakanyanya kushomeka asi paine zvirevo chaizvo zvekuti huwandu hwakawanda hwevadzidzi-vakuru vadzidzi pamwe nemhare-chinzvimbo havasi kuchengetedza izvozvi.
Naples North Rotary Scholarship
Mudzidzi akapedza kudzidza kubva kuCollier County Zvikoro kana kugara muCollier County;
Enda kushoma pane imwechete (1) Naples North Rotary musangano, wakarongedzwa kuburikidza neHodges University (Director weYunivhesiti Kufambira Mberi) uye nhengo yekirabhu; uye
Tora chikamu mune imwe (1) Naples North Rotary sevhisi chirongwa mukati megore mari yakagamuchirwa.
Iwo maratidziro eiyo masomo sekusarudzwa neanopa anoderedza huwandu hwezvishandiso zvedzidzo izvo zvinogamuchirwa neScholarship Committee yakanangana neiyi kudzidza. Nehurombo, vadzidzi vanonzwa kuti vangangotadza kuenda kumisangano yakatarwa uye / kana kutora chikamu muhurongwa hwebasa nekuda kwehupenyu hwavo uye marongero ebasa.
Meftah Foundation Scholarship yeVamwe Vanamai
Anofanira kunge ari amai vasina murume vane vana vadiki vanogara pamba;
Vakanyoresa mune ye-kambasi kana yepamhepo epurogiramu yechikoro uye
Kutsvaga dhigirii rekoreji kuwedzera mikana yavo yebasa uye mari yemhuri.
Mumwe (1) anogamuchira anogona kupihwa $ 2500, pagore, panguva yekudonha chikamu.
Pane huwandu hwakakosha hwemari huripo; zvinosuwisa, nekuda kwemirau kubva kune anenge apa, $ 2500 yemari ine imwechete (1) inogashira ndiyo yakanyanya mari iyo inogona kupihwa gore rega.
Moorings Park Foundation Scholarship mu Nursing
Mudzidzi ari kuita degree reBachelor mu Nursing; uye
Kukosha kuchapihwa kune vanogamuchira vanogara muCollier County, asi hazvidiwe.
Vadzidzi vanogumira pamari inotevera pachikamu:
Iwo kudzidza kwakavakirwa pane zvakatemwa zvechirongwa icho chine huwandu hwakakura hwevadzidzi muchirongwa apa paine huwandu hushoma hwemari inogamuchirwa gore rega rega.
Moorings Park Foundation Scholarship muClinical Mental Hutano
Mudzidzi anoteedzera Master's degree muClinical Mental Health Counselling; uye
Muvhoni uyo akaburitswa zvinokudzwa;
Rondedzero inotaurisa pachako rekodhi rebasa remauto kusanganisira post-graduate basa zvinangwa uye zvirongwa;
Yakazara-nguva yekunyoresa chimiro (12 kana zvimwe zvikwereti zveGG; 9 kana zvimwe zvikwereti zveGR);
Anogara kuCollier, Lee kana Charlotte County; uye
Angangoita 2.5 GPA yevadzidzi vepasi- kana vanopedza kudzidza-chikamu.
Mari yehunyanzvi ichaenzana neyechikoro-chete mutengo weimwe (1) kosi pachikamu.
Scholarship inogumira kune gumi nemaviri (12), pagore.
Scholarship maratidziro anounza yakaganhurirwa nhamba yekushandisa, kunyanya zvine chekuita nechinyorwa chinyorwa. Nepo vadzidzi vazhinji vasinganakirwe nekunyora / kugadzira zvinyorwa, Hofisi yeVadzidzi veMari Zvemari 'timu yeVeterans Services yatanga kuita hurukuro nevadzidzi vekare maererano nekunyora zvinyorwa uye kuvabatsira iwo maitiro.
Mari yakawanda pagore yemabhezari akapihwa zvakare inoratidza kunetseka; kana iyo Scholarship Committee ichikwanisa kupa vadzidzi gumi nevaviri, mari yepamusoro iri kushandiswa ingave $ 12 pagore.
Veteran kana mukadzi weaka veteran akaburitswa zvinokudzwa;
Rondedzero inotaurisa rekodhi rebasa remauto kana maonero evakwanyina ezvemhedzisiro yacho kusanganisira post-graduate basa zvinangwa uye zvirongwa;
Scholarship inogumira kune gumi nemaviri (12) mibairo, pagore.
Kana veteran vanokwanisa kana vakaroora vema veterans vasipo, mari yemubhadharo inogona kupihwa kune Fisher School of Technology (FSOT) mudzidzi.
Earl & Thelma Hodges Scholarship
Rondedzero inotaura nezvematambudziko ako usati wanyoresa kuHodges University uku uchisanganisira zvinangwa zvekupedza kudzidza uye zvirongwa;
Anogara kuCollier, Lee, Charlotte, Glade kana Hendry County; uye
Scholarship inogumira kune maviri (2) mibairo gore rega, yakanangana nekudonha uye nguva yechando chete.
Scholarship maratidziro anounza yakaganhurirwa nhamba yekushandisa, kunyanya zvine chekuita nechinyorwa chinyorwa. Nepo vadzidzi vazhinji vasinganakirwe nekunyora / kugadzira zvinyorwa, iyo Hofisi yeVadzidzi ZveMari Inoshanda inoshanda pamwe neHofisi yeVadzidzi Chiitiko kuti vatsanangure zvirinani maitiro enyaya uye maitiro ekunyora rondedzero inoshanda.
Mari yakawanda pagore yemabhezari akapihwa zvakare inoratidza kunetseka; kana iyo Scholarship Committee ichikwanisa kupa vadzidzi gumi nevaviri, mari yepamusoro iri kushandiswa ingave $ 2 pagore.
Rondedzero inotaurisa pachako rekodhi rebasa remauto kusanganisira post-graduate basa zvinangwa uye zvirongwa; uye
Chishoma chikamu chenguva-yekunyora chinzvimbo (angangoita matanhatu kana akawanda makiredhi pachikamu).
Jeanette Brock LPN kudzidza
Iyo degree chirongwa chinofanirwa kunge chiri muLayisensi Inoshanda Nursing (LPN);
Angangoita mashoma ekuwedzera giredhi poindi yepakati (GPA) ye2.0.
Iyo Scholarship Committee inoziva nezve yazvino chiyero chemari uye inoganhurirwa pamarii yemari inofanira kupihwa pamwedzi.
Ndingaite Sei Ini Kunyorera Kune Institutional Scholarship?
Mubairo Chitubu ndiyo yedu yemagetsi system uko vadzidzi vanogona kupinda (imwechete kusaina-pa) uye zadza kunyorera kwechero kudzidza. Asati anyorera, vadzidzi vanogona kuona ruzivo rwakadzama nezve yega yega yemabhezari edu uye nzira dzinodiwa kuti vagamuchire mari yakumbirwa. Chishandiso chikuru chinobvumidza vadzidzi kunyorera imwe kana dzakawanda kudzidza panguva imwe chete. Isu tiri parizvino kuvandudza yedu Mubairo Chitubu system kuti vadzidzi vagone kuona zvimwe zvakadzama nezve kudzidza, nzira dzinodiwa, nguva dzakatarwa dzechidzidzo chega chega chedzidzo, uye nguva yekunyorera kune yega kudzidza - uku kukwidziridzwa kunenge kuri kuuya kwechirongwa chaNdira 2019 nekupfuura.
Nyorera Institutional Scholarship
Scholarship Mari Yekudzikisira
Chinangwa cheiyo Hodges University kudzidza chirongwa ndechekuwedzera zviwanikwa zvevadzidzi kusvika pamwero unokwanisa kuvagonesa kutanga kana kuenderera mberi nezvidzidzo zveyunivhesiti. Vadzidzi vese vanokodzera kunyorera mabhezari. Ndokumbirawo muyeuke kuti kana mudzidzi atove kutambira mubhadharo wekudzidzira uye / kana kudzidza waiver sechikamu chezvimwe zvibvumirano zveyunivhesiti kana marongero, mhando iyi yemari inorongwa semubatsiro wesangano uye vadzidzi ivavo vanenge vasina kukodzera kuwana zvese zvedzidzo zvikwereti / waivers uye institutional kudzidza.
Zvepasi rose zvinodikanwa zvekukodzera kumabhizimusi echikoro zvinosanganisira, asi hazvirevi kune: Vadzidzi vanofanirwa kuve undergraduate kana vakapedza kudzidza vakamira zvakanaka muchikamu chavo chazvino neinenge iri shoma yekuwedzera giredhi poindi yepakati (GPA) ye2.0 yevadzidzi vepasati uye 3.0 GPA yevadzidzi vakapedza kudzidza. Yedzidzo yemubhadharo mibairo inogona kuve neruzivo rwekuwedzera uye nzira dzekufanirwa dzinogona kuwanikwa pazasi.